DVD Players maka Windows 8
Ị nwere ike chọpụtara mgbe ị malitere gị Windows 8 na kọmputa maka oge mbụ na ihe-efu. Ya bụ, a DVD ọkpụkpọ. Microsoft mere ka mkpebi na akụkụ n'ihi ịba ụba ewu ewu na nke nkwanye videos. N'ihi na ọtụtụ nde mmadụ ndị ka nwere DVD, Otú ọ dị, ọ hapụrụ ha na-enweghị a ụzọ na-ekiri ha ha na kọmputa na-enweghị n'idebata ọzọ software. Ozi ọma ahụ bụ, nke a pụtara na ị pụrụ bulie DVD ọkpụkpọ na ị chọrọ iji. Ka na-lee anya na iri kasị mma DVD Player i nwere ike iji maka Windows 8.
Enweghị obi abụọ, nke a bụ ndị kasị ewu ewu free DVD ọkpụkpọ i nwere ike ịhụ. Ọ bụ ihe na-emeghe isi omume na-arụ ọrụ na a dịgasị iche iche nke sistem na kọmputa ụdị, na nwere ike igwu bụla ọnụ ọgụgụ nke formats nke vidiyo na DVD. Ọ nwekwara ike aka nkwanye video, kwa. Ọ dịghị codec downloads ndị na-emekarị dị mkpa n'ihi na ọ na-abịa na ha niile na-ama kwajuru. Ị nwere ike ime mgbanwe iji na skins ọ bụrụ na ị na-ahọrọ. The interface dị mfe ịghọta na-eji, ọbụna maka novice kọmputa ọrụ.
2. Media Player Omuma Home Cinema
Nke a free omume bụ ngwa ngwa na-amalite mgbe ulo oru na ọ dịghị ewe elu ukwuu ụlọ na draịvụ ike gị. Ọ na-ese a otutu dị ka okenye version nke Windows Media Player, ma ọ bụrụ na ị bụ ala na-eji ya, ị ga na-eche nri n'ụlọ. Ọ dịghị achọ ka ị na dị ka onye ọrụ ịchọ media oge ọ bụla mgbe ị na-achọ na-ekiri ihe ọzọ karịa a kasị nso nso-ele video. Ọ na-adịghị na-echeta video ọnọdụ mgbe ị pịa nkwụsị bọtịnụ. Na kwuru, ọ na-apụghị naanị igwuri egwu, DVD ma vidiyo ndị ọzọ na gị video nchekwa.
Nke a na usoro bụ ike igwu egwu kasị nkịtị video formats si n'ebe, nakwa dị ka gị DVD. The interface dị ọcha na usoro ihe omume nwere ọtụtụ codecs gụnyere otú ị na-adịghị na-eche maka ihe ndị ọzọ ibudata mgbe ị chọrọ igwu a nkiri. Ị nwere nhọrọ ị nwere ike ịhọrọ site na nke kacha mma ụda na nyochaa mkpebi o kwere omume. E nwere ihe equalizer i nwere ike iji na melite otú ị chọrọ na ndepụta okwu na-arụ ọrụ, na ụfọdụ nhọrọ dị ọbụna mgbe ị na-egwuri egwu a nkiri. Ị ọbụna nwere nhọrọ iji gị smart ekwentị dị ka gị ime akara.
Chere, ọ bụghị anyị na-ekwu na e nwere abụghị a Windows Media Player ọ bụla ọzọ? Bụghị ezi. Mgbe ọ na-abụghịzi abịa tupu bundled n'ime kọmputa gị, ọ bụ ka a na omume nke Microsoft na-enye dị ka ihe tinye-na na. Ọ nwere niile nke atụmatụ ị hụrụ n'anya - DVD na CD playback, na-ekiri na ndekọ-egosi na telivishọn, na hazie listi ọkpụkpọ. Mgbe ị na ibudata ya, ị nwere ike ma na-ahọrọ awara awara nhọrọ, ma ọ bụ i nwere ike hazie gị echichi inwe nnọọ atụmatụ na ị chọrọ. Mgbe ahụ, mgbe ị chọrọ ịgba ọsọ a nkiri, ị dị nnọọ mkpa swipe na si nri, pịa search, mgbe ahụ pịnye na Windows Media Center. Ị ga-apụ na-agba ọsọ.
Nke a bụ free omume na ọ bụ nakwa oghe isi. Ọ nwere ike na-agba ọsọ na a ọnụ ọgụgụ nke sistem, ọbụna na obere ngwaọrụ, otú i nwere ike iji gị smart ekwentị dị ka a ime akara. Ọ bụrụ na ị chọrọ nkwado, nke a bụ otu usoro ihe omume ahụ nke nwere ọnụ ọgụgụ nke nkwado nhọrọ dị, gụnyere a dịgasị iche iche nke mmadụ mgbasa ozi nyiwe. The interface bụ nnọọ mma, na njikwa emi odude na n'aka ekpe, sized obere ezu na ha adịghị egbochi gị ngosi. Ọ nwere ike na ọ bụghị nanị na-egwu DVD, ọ pụkwara enuba ndụ videos, ọbụna ohuru omume.
Ọ bụghị fancy, ma nke a omume ahapụ ị na-egwu gị DVD nakwa dị ka ihe ọ bụla ọnụ ọgụgụ nke vidiyo na kọmputa gị. Ọ nwere ezi àgwà ọdịyo na video mkpebi. Ị nwere njikwa on a sere n'elu toolbar ma ọ bụ i nwere ike ịnweta ha site na nri ịpị n'ebe ọ bụla na ihuenyo. Na toolbar bụ ugbu niile mgbe ị na-ekiri gị nkiri na ihuenyo zuru, Otú ọ dị. E nwere asụsụ nhọrọ na ị nwere ike ịtọ dị ka ị chọrọ. E a na ibe edokọbara mma nke bụ kemfe maka na-abịa azụ ọkacha mmasị gị Ebeonodu. I nwekwara ike ile screencaps nke oké oge.
Nke a free ọkpụkpọ nwere ike ijikwa Blu-ụzarị nakwa dị ka mgbe DVD, ihe na-ọtụtụ egwuregwu na-adịghị ike, karịsịa free n'anya. Nke a pụtara na ọ bụ na-ike igwu egwu elu definition video faịlụ na 1080p mkpebi. Na karịrị 400 codecs gụnyere, ị ga-enweghị-echere iji na-ele gị nkiri mgbe a faịlụ Nwela ebudatara. Ya interface bụ nnọọ ọcha, na njikwa emi odude na ala nke ihuenyo. Ị nwere ike hazi ndepụta okwu nakwa dị ka video nhọrọ.
Nke a na usoro bụkwa free. Ọ na-amata na ọtụtụ ndị na-eji ha na kọmputa ugbu a dị ka ehiwe nke n'ụlọ ha ntụrụndụ center, otú AVS-enye gị ohere iri uru nke na set elu. Ị nwere ike iji wuru na-audio equalizer na-ahapụ gị anụ multi-ọwa audio site na gị okwu, gụnyere 7.1. N'ihi na nke ikike, ọ bụ a bit nke a akụ hog na kọmputa gị. I nwekwara ike iji ya dị ka a DVD burner, otú videos ị nwere na kọmputa gị nwere ike a ga-etinye diski. E nwere ọkpụrụkpụ set nke wuru-ke codecs wuru na na ike ijikwa a dịgasị iche iche nke video faịlụ maka gị.
9. Blu-ray Player maka Windows
Ọ bụrụ na ị hụrụ n'anya na-egwu Blu-ụzarị (na n'ezie, onye na-adịghị?), Nke a ọkpụkpọ-enyere gị aka ime nke ahụ na kọmputa gị. Ọ bụghị freeware, ma ị ga-esi a ịrịba ikpe oge iji nwalee ya si - 90 ụbọchị. Ọ nwere ike iji na-aghọta mpụga nakwa dị ka esịtidem Player, otú ahụ ogologo oge dị ka i nwere na njikọ Ịntanetị otú playback ikikere pụrụ ịchọta. Ma, ọ dịghị dị egwu Blu-ụzarị. Ị nwere ike igwu fọrọ nke nta ọ bụla usoro nke video na ya dị ka nke ọma, na ọ pụrụ emekọ gị mmadụ media akaụntụ otú i nwere ike ịkekọrịta ozi na ndị enyi gị na Fans. Ọ na-adịghị abịa na ọtụtụ ndị ọzọ na atụmatụ, ma i nwere ike tinye ndepụta okwu ma ọ bụrụ na ị ga-achọ.
10. Real Player Ọzọ
Real Audio ka branched si ihe karịrị afọ na-agụnye video, ugbu a na Windows agaghịkwa ngwugwu Windows Media na na sistemụ, na ha dị njikere ma nwee ike kwụpụ. Real Player Plus bụ elu ọgwụgwụ version nke Real Player na ya nwere ike aka-akpọ DVD. Ọ dị mfe iji - niile i nwere ime mgbe ọ na-ebudatara bụ na-emeghe usoro ihe omume, Ibu Ibu gị DVD, pịa Library, ịnyagharịa CD / DVD, na pịa na egwu ị chọrọ na-amalite na-ekiri.
Dị ka ị pụrụ ịhụ, gị nhọrọ nwere ọtụtụ mgbe ọ na-abịa na-achọta a DVD ọkpụkpọ maka gị Windows 8 na kọmputa. Ị gaghị ekpe ke oyi ọ bụla ogologo.
Top Iri Best AVS DVD Player Alternatives
> Resource> Top List> Top Iri Best DVD Players maka Windows 8